Iphepha lokuzibamba: iifoto ngeenyawo nevidiyo
Indlela yokwenza iphepha eliphambukayo ezandleni zakho
Ubuninzi bokuzonwabisa ekhaya: unokudlala i-lotto, "ulwandle lolwandle", "ingwenya", upende, ulungiselele ukuveliswa kwetrakthi okanye wenze uqikelelo omnye nomnye. Xa ugosa, unokwenza ipopu yephepha ngezandla zakho. Iifoto, amacebo kunye neevidiyo ezichazwe ngezantsi ziya kukunceda uqonde le nguqulo elula ye-origami. I-cracker yephepha elula kodwa ehlekisayo iya kuba yinto yokuzonwabisa, kwaye indalo yayo iya kuthatha bobabini nabantwana abaya kuba nemihlali ngokungena kwiimidlalo zobuntwana babo.
Iiplani zabaqhigi bephepha
Ukuze wenze i-flapper yephepha ngezandla zakho, kuyafaneleka ukusebenzisa imifanekiso ebonwayo. Ukuxhomekeka kubo, kuya kunokwenzeka ukwenza isinyathelo ngamanyathelo esigaba semveliso esivela kwiphepha lephepha elipapasha isandi esikhulu. Into ephambili kukuba ulandele ngokucacileyo, kwaye ke yonke into iya kulungeleka.
Ukwenza ikhempyutheni yephepha ngezandla zakho
Ngoko, njani ukwenza i-cracker eyenziwe ngamaphepha? Yonke into ilula kakhulu. Nangona umntwana onokwenza umdlalo onjalo okokuqala uya kuhlangabezana nomsebenzi.
Okokuqala, kulungele ukulungiselela loo nto. Ukwenza i-cracker, kuya kufuneka usebenzise iphepha le-A4 iphepha okanye iphepha le-tetrad eliqhelekileyo.
Thatha iphepha eliqhelekileyo lephepha ngalinye naluphi na umbala kunye nobukhulu. Ngendlela, loo mveliso iya kuba yintsusa, xa usebenzisa iphepha elikhawulayo okanye iphepha eliprintwayo ngokungavamile. Yifake ngesiqingatha, uze uvele. Oku kuya kudala ifowuni.
Ukuqhubela phambili, ngokunyanisekileyo ukuya kwinqanaba lephepha, kwindawo apho umgca wecala ufunyenwe khona, ugoba zonke iikona.
Emva koko bhoca ingenanto ye-cracker enkulu kwisiqingatha. Kule meko, zonke iimbombo ezibophekileyo mazibe ngaphakathi kwemveliso.
Ngoku umfanekiso obangelwayo, ufana neentetho ze-trapezoidal, ziphindiwe kwisiqingatha kwakhona. Emva kokuba umsebenzi ovela kwiphepha lephepha kufuneka abuyele emuva. Oku kuya kudala imigqa yamatyala ayimfuneko.
Emva koko fakisha iikona ze-future cracker ukwenzela ukuba intambo yazo ihambisane ngqo nomgca ofunyenweyo.
Ngoku kufuneka uhlaziye kwakhona iikona. Ngelo xesha, i-cracker yephepha iphepheni kunye nomgca, owawusetyenziswe njenge-axis reference kwisinyathelo esandulelayo. Kubaluleke kakhulu ukuba ugqobhe iingqungquthela kwimigca esele yenziwe ehleli emva kweefolda. Ngenxa yoko, kufuneka ufumane umfanekiso olula - uhlobo lwesantathu. Zonke iinqonga kufuneka zenziwe nge-ironed.
Njengoko uyakubona, iphepha le-cracker lenziwe ngephepha kunye nezandla zalo ngokulula. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuzisa i-cracker, eyadalwa ngokusekelwe kwiphepha eliqhelekileyo lephepha, ukwenza into. Ukwenza oku, kunele ukuthatha isiphumo esiphumelayo malunga neengcebiso ezibukhali, ukuphakamisa umsebenzi ophezulu, phezu kwentloko yakho kwaye ngokugqithiseleyo, uyifake phantsi. I-clapper iya kukhupha ihlombe elikhulu. Ukukhangwa kwaloo nto yokudlala iyinto yokuba inokwenziwa ngabantwana kunye nabantu abadala. Ukongeza, ungasebenzisa i-clapper yokumangalisa inani elingenamkhawulo wexesha.
Ividiyo: indlela yokwenza i-cracker yephepha ngokwakho
Ngoku uyazi ukwenza i-cracker yephepha. Uze ubone inkqubo yokuveliswa kwayo ngokubanzi iinkcukacha onokuyenza kwividiyo engezantsi.
Uqeqesho: umdaniso wokubetha
Ukuzonwabisa okungaqhelekanga kwamantombazana
Indlela yokwenza amabhotile enhle ngezandla zakho?
Indlela yokwenza ifriji yamaphepha ehamba
Indlela yokuncelisa umntwana osandula
Konke malunga neGlycolic Peeling
Ukuxhomekeka kobugcisa obuhle
Isaladi kunye namapheya kunye noshizi
Yintoni okufanele ibe sisidlo sasekuseni esifanelekileyo?
Yongeza imvula: imibala emithathu eqaqambileyo yonyaka-2017